Abathengisi beeglavu zeglavu kunye nefektri - China iiglavu zeglavu zabavelisi
Iiglavu zesikhumba zodade ezinesitayile esineegusha zoboya
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo, isikhumba sangasemva seglavu esibonakala ngemingxunya yesitayile, umtya wesihlahla kunye nokuvalwa kweqhosha elomeleleyo. Enye i-collocate i-100% yeefeece cuff. Umdibaniso ogqibeleleyo, olula kunye nobuhle. Ukulungiselela ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yezangaphandle, ukufaneleka. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inombolo yobuGcisa: DG-015M ● Izinto eziphathekayo: 100% yokwenene yesikhumba sangaphantsi ● Uluhlu: umgca woboya
Iiglavu zangaphantsi ezinesitayile ezithandekayo zikaDeerskin ezinamanqaku amathathu
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, uyilo oluthungwe ngesandla, ngamanqaku ama-3 okuthunga ngesandla ngasemva. Ukuvuleka okuncinci kunye nomtya omnye wesandla kunye nokuvalwa kwe-snap ehlengahlengiswayo. Ibhendi yokwaleka ngokulinganayo ejikeleze isihlahla seglavu, uBuhle kunye nokulula. Ukulungele ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela kunye nezihlandlo ezininzi. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inombolo yobugcisa: DG-008H ● Izinto eziphathekayo: 100% yokwenene deerskin ● Ukugcoba: i-cashmere lining ● Umbala: Umnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubukhulu: ...
iiglavu zangaphantsi ezenziwe ngezandla eziqhelekileyo ezinamanqaku amathathu
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, Zonke zenziwe ngesandla.Yila ngamanqaku ama-3 okuthunga ngesandla ngasemva. Ukuvuleka okuncinci kunye nomtya omnye wesandla kunye nokuvalwa kwe-snap ehlengahlengiswayo. Ubuhle kunye nokulula. Ukulungele ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela kunye nezihlandlo ezininzi. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inombolo yobugcisa: DG-007H ● Izinto: 100% yokwenene deerskin ● Ukugcoba: i-cashmere lining ● Umbala: Umnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubungakanani: Amanenekazi: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Amadoda: S /8.5,M/9,L/9.5 ...
UDeerskin uqhuba iiglavu ezenziwe ngesandla ezinamanqaku amathathu okuthunga ngesandla
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, uyilo lwesandla, Ukuvuleka okuncinci kwicala lekhafu.Kwaye ibhanti emodareyithayo ejikeleze isihlahla seglavu ekulungele ukuyinxiba. Ulungele ukuqhuba, ukukhwela ibhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele,. ● Inqaku lobugcisa: DG-006H ● Izinto: 100% yokwenene deerskin ● Ukugcoba: akukho lining ● Umbala: Omnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubungakanani: Abafazi: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Amadoda: S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● I-OEM: Ewe ...
UDeerskin uqhuba iiglavu eziqhelekileyo ezibanjwa ngesandla ngamanqaku amathathu
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, uyilo lwesandla, Ukuvuleka okuncinci kwicala lekhafu. Ukulungele ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukufaneleka. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inqaku lobugcisa: DG-005H ● Izinto eziphathekayo: 100% yokwenene deerskin ● Umbala: akukho lining ● Umbala: Omnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubungakanani: Amanenekazi: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Amadoda: S /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: Ewe ● MOQ: 200 prs
UDeerskin uqhuba iiglavu zemfashini ngesandla
Isikhumba sangemva seglavu esibonakala ngemingxunya yesitayile, umtya wesandla kunye nokuvalwa kweqhosha elomeleleyo. Isebenziseka lula. Ifanelekile ukuqhuba, ukukhwela ibhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yezangaphandle, impilo yomzimba. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inombolo yobugcisa: DG-003H ● Izinto eziphathekayo: 100% yokwenene deerskin ● Ukugcoba: akukho lining ● Umbala: Omnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubungakanani ...
IDeerskin yokuqhuba ifashoni iiglavu ezenziwe ngesandla / ezenziwe ngesandla
Yenziwe ngethwathwa elithambileyo nelomeleleyo, Zonke zibanjwa ngesandla. Isoft ethambileyo kodwa enganyangekiyo kwaye eyomeleleyo, isikhumba esityhidiweyo kunye nomoya ongena ngasemva onika amandla okuphefumla kunye nobhetyebhetye kwizandla zakho. Umtya wesandla kunye nokuvalwa kweqhosha eliqinileyo. Ukulungele ukuqhuba, ukulungele ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukukhwela ibhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela. ● Inombolo yobugcisa: DG-002H ● Izinto: 100% yokwenene deerskin ● Ukugcoba: i-cashmere lining ● Umbala: Umnyama omnyama kunye neminye imibala ● Ubungakanani: Amantombazana: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8 Amadoda: S /8.5,M/9,L/9.5, ...
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, Zonke zenziwe ngesandla.Yila ngamanqaku ama-3 okuthunga ngesandla ngasemva. Olunye uvalo oluncinci kwikhefu. Ukuvula kungasentendeni okanye ngasemva. Kuxhomekeke kuwe. Kulula ukuyisebenzisa. Ukulungele ukuqhuba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukufaneleka. Ithambile kakhulu kodwa iyamelana kwaye yomelele! ● Inombolo yobugcisa: DG-001H ● Izinto eziphathekayo: 100% yesikhumba sangempela se-deers ● Umbala: akukho lining /8.5,M/9,L/9.5,XL/10 ● OEM: Ewe ● MOQ: 200 prs
Iiglavu zefashoni zangaphantsi ezineminwe yokuhombisa / engenamunwe
Iiglavu zedeerkin ezenziwe ngemingxunya yesitayile, umtya wesihlahla kunye nokuvalwa kweqhosha elomeleleyo. Isebenziseka lula. Isikhumba esityhidiweyo kunye nomoya ongena ngasemva ubonelela ngokuphefumla okuphezulu-amandla kunye nokuguquguquka kwezandla zakho. Zonke iiglavu zesikhumba zomnwe zenziwe ngamagcisa aneminyaka engaphezulu kwe-10 yamava.Akulungele ukuqhuba, ukukhwela ibhayisikile, ukukhwela ibhayisekile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela. Ithambile kakhulu kodwa ayimelani ...
Iiglavu zezikhumba zefashoni ezingenaminwe ezinamanqaku amathathu
Yenziwe ngesikhumba esithambileyo nesomeleleyo se-deerskin, kufanelekile kwaye sinike ukuziva okuhle kwizandla. Iiglavu zezikhumba azenzelwanga lining, umtya wesandla kunye nokuvalwa kwetyathanga leViscose. Isebenziseka lula. Kwaye ubonelele ngobuchule bokuphefumla kunye nokuguquguquka kwezandla zakho. Zonke iiglavu zesikhumba zomnwe zenziwe ngamagcisa aneminyaka engaphezulu kwe-10 yamava.Akulungele ukuqhuba, ukukhwela ibhayisikile, ukukhwela ibhayisekile, umthambo, imidlalo yangaphandle, ukomelela. Super ethambileyo kodwa enganyangekiyo kwaye eyomeleleyo, umtya wesandla kunye nokuvalwa kwesitshixo ...